Biko gụọ! http://www.knwautobody.com achọ echiche NA ka ọnọdụ nke ikwe ojiji nke http://www.knwautobody.com.
Site na ịnweta ma ọ bụ iji saịtị a unu na-anọchi anya na i nwere ikike zuru ezu na-eme ihe-ekwekọrịta n'aka gị, Ọ bụla ọzọ, Ụlọ ọrụ, Ma ọ bụ iwu kwadoro, Na na unu iji na / ma ọ bụ mmekọrịta, Nakwa dị ka nọgidere na iji ma ọ bụ na-emekọ, Na saịtị lere unu ọ na-agụ ma kweta ndị a Usoro ojiji nakwa dị ka NDỊ ỌZỌ nkwekọrịta na anyị nwere ike post na saịtị.
BY ikiri, Na-eleta, Iji, MA Ọ BỤ mmekọrịta na http://www.knwautobody.com ma ọ bụ na Ọ BỤLA Pụrụ Iche, GBAPỤTA, MA Ọ BỤ Mgbasa na-egosi na IT, Unu na-ekwere ihe niile ndokwa nke A Usoro ojiji iwu na iwu nzuzo nke http://www.knwautobody.com.
http://www.knwautobody.com kpọmkwem gọrọ ACCESS mmadụ ọ bụla na-kpuchie site Ụmụaka ONLINE nzuzo Nchedo Act (Iko) OF 1998.
http://www.knwautobody.com mee ikike agọnahụ ACCESS ọ bụla onye ma ọ bụ na-ekiri maka ihe ọ bụla iwu kwadoro ihe mere. N'okpuru Okwu nke iwu nzuzo, Nke unu NABATA AS A Ọnọdụ ikiri, http://www.knwautobody.com na-ekwe ka anakọta na-echekwa data na ozi maka nzube nke mwepu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eji.
A Usoro ojiji nkwekọrịta nwere ike ịgbanwe site n'oge ruo n'oge. Ndị ọbịa AN kemkwenye ọrụ, Dị ka akụkụ nke echiche ikike iji nweta http://www.knwautobody.com, Iji na-onwe ha asian nke mgbanwe ndị dị otú ịtụleghachi A Usoro ojiji PEEJI oge ọ bụla ha na-eleta http://www.knwautobody.com.
Ndị ọzọ na-Okwu eji nkwekọrịta
Ọbịa, ndị na-ekiri, ọrụ, debanyere aha, òtù, mmekọ, ma ọ bụ ndị ahịa, ịgụnye zoro aka n'ime ebe a dị ka “Ọbịa,” bụ ndị ọzọ na-nkwekọrịta a. The website na nwe ya na / ma ọ rụọ bụ ndị ọzọ na-nkwekọrịta a, n'ime ebe a kwuru na dị ka “Weebụsaịtị.”
Jiri nke ozi site na a website
Ọ bụrụ na i banye awara dere nkwekọrịta na a website Kama, ọbịa, ndị na-ekiri, debanyere aha, òtù, mmekọ, ma ọ bụ ndị ahịa na-enweghị ikike iji ozi a na a azụmahịa ma ọ bụ n'ihu ọha; ha na-enweghị ikike ohuru ya, detuo ya, zọpụta ya, bipụta ya, ere ya, ma ọ bụ na-ebipụta ihe ọ bụla òkè nke ọdịnaya nke a website. Site na ịnweta ọdịnaya nke a website, ị na-ekweta ọnọdụ a nke ohere na Ị na-ekweta na ihe ọ bụla na-enwetaghị ikike ojiji bụ na iwu akwadoghị na ike na-erubere gị ka ị na obodo ma ọ bụ mpụ penalties. Ọzọ, Visitor nwere dịghị ikike bụla iji ọdịnaya nke, ma ọ bụ akụkụ ya, tinyere ya ọdụ data, apụghị ịhụ anya peeji nke, jikọtara peeji nke, kpatara koodu, ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi ihe onwunwe saịtị nwere ike ịnwe, n'ihi ihe ọ bụla ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ojiji bụla. Na ude nke eziokwu na ọ pụrụ isi ike gụpụta kpọmkwem emebi ịda site ịda iwu nke ndokwa a, Visitor kwenyere isoro ọfụma na chefuo ndị nwe http://www.knwautobody.com na liquidated emebi na ego nke US. $100,000, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ pụrụ ịgbakọta, ahụ n'ezie na-akwụ ụgwọ na n'ezie emebi maka iro nke ndokwa a, bụla dị ukwuu. Visitor ikike na ọ na-aghọta na ịnakwere ndokwa a bụ a ọnọdụ nke ịnweta http://www.knwautobody.com na na ịnweta http://www.knwautobody.com bụ nabata.
Nwe nke website ma ọ bụ nri iji, Ere, Kwusaanụ ọdịnaya nke a website
The website na ọdịnaya na-ekesịpde ma ọ bụ na ikikere site na website onye nwe. Ihe ndị e dere na website ga-ekekerede na-proprietary na nwebiisinka. Ọbịa enweghị ikike bụla na saịtị ọdịnaya. Jiri nke website ọdịnaya n'ihi ihe ọ bụla bụ na iwu akwadoghị ma ọ na-eme na awara awara nkwekọrịta ma ọ bụ ikike nke website.
HYPERLINKING na saịtị, Ngalaba-mbọn, “Na-akpa nkata” NA nakweere n'ebe weebụ na saịtị machibidoro
Ọ bụrụ na expressly ikike site website, ọ dịghị onye nwere ike hyperlink saịtị a, ma ọ bụ akụkụ ya, (na nsonye, ma na ọnweghị oke, logotypes, ụghalaahịa, branding ma ọ bụ nwebiisinka ihe onwunwe) ka ha n'ihi ihe ọ bụla. Ọzọkwa, ị na-agaghị ekwe ka ọmụmaatụ URL (website adreesị) nke a website ma ọ bụ ọ bụla na peeji nke a website na ọ bụla azụmahịa ma ọ bụ ndị na-abụghị azụmahịa media enweghị awara awara ikike n'aka anyị, ma ọ bụ ka ị na-ekwe ka 'etiti’ saịtị. Ị kpọmkwem ekweta-arụkọ ọrụ na weebụsaịtị iji wepu ma ọ edepuchaala rụọ ọrụ ọ bụla dị otú ahụ eme, na-atụba maka ihe niile na-emebi ịda site emebi ndokwa a. Na ude nke eziokwu na ọ pụrụ isi ike gụpụta kpọmkwem emebi ịda site ịda iwu nke ndokwa a, ị na-ekweta chefuo ndị nwe http://www.knwautobody.com na liquidated emebi na ego nke US. $100,000, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ pụrụ ịgbakọta, ahụ n'ezie na-akwụ ụgwọ na n'ezie emebi maka iro nke ndokwa a, bụla dị ukwuu. Ị akwukwo ikpe na ị na-aghọta na ịnara ndokwa a bụ a ọnọdụ nke ịnweta http://www.knwautobody.com na na ịnweta http://www.knwautobody.com bụ nabata.
Disclaimer IHE N'IME nke saịtị na
http://www.knwautobody.com disclaims ọ bụla ọrụ maka izi ezi nke ọdịnaya pụtara na, jikọrọ on, ma ọ bụ kwuru na http://www.knwautobody.com. Ọbịa iche niile ize ndụ metụtara ikiri, ịgụ, iji, ma ọ bụ ịdabere n'elu ozi a. Ọ bụrụ na i ma kpụrụ awara nkwekọrịta Kama nke ahụ na anyị, ị na-enweghị ikike na-adabere na ozi ọ bụla ẹdude n'ime ebe a dị ka ezi. Anyị na-eme mba dị otú ahụ akwụkwọ ikike.
Disclaimer ihe ọjọ mere ka kọmputa gị ma ọ software si mmekọrịta na A website ma ọ bụ na ya na. Esenowo eburu nile n'ihe ize ndụ nke nje, Ikpuru, Ọ bụ ndị ọzọ na-emerụ emerụ ihe.
Anyị iche mba ọrụ maka mmebi kọmputa ma ọ bụ software nke esenowo ma ọ bụ onye ọ bụla esenowo ekemende agwa si na-emerụ emerụ koodu ma ọ bụ data na-n'amaghị ama gafere ka esenowo si na kọmputa. Ọzọ, esenowo echiche na interacts na saịtị a, ma ọ bụ ọkọlọtọ ma ọ bụ mmapụta gbasie ma ọ bụ mgbasa ozi egosipụta ya, na ya onwe ya n'ihe ize ndụ.
Disclaimer ihe ọjọ kpatara Downloads
Visitor Downloads ọmụma site na saịtị a n'oge a ihe ize ndụ nke. Weebụsaịtị-eme ka mba akwụkwọ ikike na downloads bụ free nke na-emerụ emerụ kọmputa Koodu, na nsonye, ma na ọnweghị oke, nje na ikpuru.
Site ị na-elele, iji, ma ọ bụ inwe mmekọrịta n'ụzọ ọ bụla na saịtị a, gụnyere ọkọlọtọ, mgbasa ozi, ma ọ bụ mmapụta gbasie, downloads, na dị ka a ọnọdụ nke website na-ekwe ka ya iwu na-akwadoghị ikiri, Visitor ruo mgbe ebighị ebi waives niile ikike na-ekwu nke mmebi nke bụla na ihe niile nkọwa dabeere ọ bụla causal ihe dapụtara na bụla o kwere omume ojoo, n'agbanyeghị otú heinous ma ọ bụ ọtụtụ, ma anụ ahụ ma ọ bụ uche, foreseeable ma ọ bụ unforeseeable, ma onye ma ọ bụ azụmahịa na ọdịdị. Maka ihe ọ bụla meworonụ ahụ nwere ike ugbu a-ekwe ka ndị a na exclusions anyị kacha ibu agaghị gafere na ego ugwo site ị, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, maka iji anyị website ma ọ bụ ọrụ.
Ọzọkwa, ị na-ekweta ịghara anyị dara iwu maka ọ bụla emebi metụtara mbipụta anyị na-apụghị, gụnyere ma na ọnweghị oke, omume nke Chineke, agha, iyi ọha egwu, insurrection, riots, ekperima ọrụ, ọdachi, emeghasịkwa nke nkwukọrịta ma ọ bụ akụrụngwa, ọrụ ụkọ ma ọ bụ disruptions (gụnyere iwu akwadoghị etiwapụ), ụkọ nke ihe, na ihe ọ bụla ihe omume ndị ọzọ nke na-adịghị n'ime anyị akara.
Visitor ekweta na na ihe omume ọ na-eme mmebi anyị ma ọ bụ a ọzọ ka a N'ihi nke ma ọ bụ ndị metụtara na ojiji nke http://www.knwautobody.com, Visitor ga indemnify anyị maka, na, ọ bụrụ na ọdabara, chebe anyị megide, ọ bụla na-ekwu maka emebi.
Visitor ekweta ka ọnọdụ nke ikiri, na ihe ọ bụla nkwurịta okwu n'etiti Visitor na weebụsaịtị na lere a nrubeisi. All nnyefe, gụnyere òkè-ya, ndịna-emeputa ẹdude n'elu ya, ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ọdịnaya nke nrubeisi, ga-aghọ ndị na-ekewaghị onwunwe nke weebụsaịtị na ike ga-eji, enweghị n'ihu ikike, maka azụmahịa iji na-enweghị ọzọ echiche nke ụdị ọ bụla. Visitor kwenyere isoro ọfụma na nanị na-ekwurịta okwu na ozi na weebụsaịtị, nke ọ chọrọ ruo mgbe ebighị ebi na-ekwe ka weebụsaịtị iji n'ụzọ ọ bụla dị ka ọ na-ahụ kwesịrị ekwesị. “Nnyefe” bụkwa a ndokwa nke Nzuzo.
Ọ dịghị ọzọ mara nke ụdị ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla a chọrọ iji nyere Visitor na Visitor expressly kpatara ihe nghọta na ikike na-achọpụta bụ waived dị ka a ọnọdụ maka ikike ele ma ọ bụ na-emekọ na website.
Dị ka akụkụ nke echiche na weebụsaịtị na-achọ maka nlele, iji ma ọ bụ mmekọrịta na a website, Visitor kwenyere isoro ọfụma na-eji na-adịgide adịgide mkpezi ikpe maka ihe ọ bụla na-ekwu, esemokwu, ma ọ bụ eneni (“MGBARAKWA”) nke ụdị ọ bụla (ma na nkwekọrịta, tort ma ọ bụ n'ụzọ) ịda si ma ọ bụ metụtara a zuo, ngwaahịa a, gụnyere ịrịọ arịrịọ mbipụta, nsogbu nzuzo, na usoro ojiji mbipụta.
Mkpezi ikpe ga-ekenịmde nsonye ka iwu nke American mkpezi ikpe Association nke di na mmetụta na ụbọchị a esemokwu na-osụk aka American mkpezi ikpe Association. Ọmụma banyere American mkpezi ikpe Association, ya iwu, na n'ụdị ya dị site na American mkpezi ikpe Association, 335 Madison Avenue, Ft 10, New York, New York, 10017-4605. Ịnụ ga-ebe obodo ma ọ bụ County onye nwe http://www.knwautobody.com.
Ọ bụrụ ga onye nkiri, esenowo, so, subscriber ma ọ bụ ahịa nwere ikike aga n'ụlọikpe ma ọ bụ nwere a juri ikpe. Onyenlereanya, esenowo, so, subscriber ma ọ bụ ahịa ga-enweghị nri na-arụ tupu ikpe chọpụtara ma e wezụga ka enyere na iwu; ị ga-enweghị nri isonye dị ka onye nnọchiteanya ma ọ bụ òtù nke ọ bụla na klas nke claimants n'ijere ọ bụla na-ekwu n'okpuru mkpezi ikpe; na mkpezi mkpebi ga-ikpeazụ a na-adịgide adịgide na-enwechaghị ikike nke mkpesa.
Agbasokarị ọzọ ga-reimbursed site ndị ọzọ maka ihe ọ bụla na ihe niile na-akwụ ụgwọ jikọtara ya na esemokwu mkpezi ikpe, gụnyere ọka iwu ụgwọ, collection ụgwọ, nchoputa ụgwọ, njem mmefu.
Ikike NA ebe mgbakọ
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla okwu banyere nke a zuo ga-ada n'ihu a n'ụlọikpe, tupu- ma ọ bụ post-mkpezi ikpe, Onyenlereanya, esenowo, so, subscriber ma ọ bụ ahịa kwenyere isoro ọfụma na na naanị na kwesịrị ekwesị ikike na-ala na obodo kwuru na ozi kọntaktị nke web nwe gwụla ma ma ebe a kpọmkwem. Na ihe omume ahụ ịgba akwụkwọ bụ na a gọọmenti etiti ikpe, kwesịrị ekwesị ikpe ga-ezigbo gọọmenti etiti ikpe ka onye nwe http://www.knwautobody.com adreesị.
Onyenlereanya, esenowo, so, subscriber ma ọ bụ ahịa ekweta na ọdabara iwu-etinyere ga, N'ọnọdụ nile, ịbụ na nke ala nke onye nwe http://www.knwautobody.com.
Na-ere ere nke ngwaahịa a bụ:
Kpọtụrụ Email: admin@knwautobody.com,Ikike niile echekwabara.